Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseFrance U-Nabil Fekir Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngegama "Umxoleli". Indaba yethu ye-Nabil Fekir yokuBantwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, imvelaphi yomndeni, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama ezindabeni ezidumile, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungumdlali onamandla amakhulu. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abheka isichazamazwi sikaNabil Fekir sika-intanethi. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
U-Nabil Fekir Ingane Yendaba Yomlando Plus Untold Biography Facts- Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
UNabil Fekir wazalelwa ngosuku lwe-18th kaJulayi 1993 eDecines, emaphethelweni aseLyon (eFrance). Wazalwa njengowokuqala kubafana abane kuyise; U-Mohamed Fekir owayesebenza isikhathi eside njengesisebenzi esakhiweni se-metallurgy kanye nonina (igama elingaziwa) owayeyisisebenzi senhlalakahle.
Umndeni kaNabil Fekir usuka e-Algeria. I-Fekirs kanye namanye ama-akhawunti ase-Algerians ayingxenye enkulu yabantu baseFrance abafudukayo (phakathi kwe-4 kuya kubantu abayizigidi ezingu-5). Abaningi balaba bantu bakhetha ukuthuthela eFrance kusukela ku-1960 kuya phambili ngenxa yezingxabano zezombusazwe e-Algeria. Lokho kwakuyisikhathi esasibona i-Algerian War of Independence noma i-Algerian Revolution.
UNabil Fekir wakhula nabafowabo; Tarik, Hamza noYassin. Bonke abazalwane bachitha iminyaka yabo yokuqala esifundeni saseJacques Monod, indawo enomkhuba ophawulekayo wase-Algeria. U-Yassin (okufanekiselwa ngezansi noNabil) wazalwa ngo-5 May 1997. Uneminyaka engu-4 encane kunomfowabo futhi owesibili uphumelele kakhulu ngemva kwakhe.
Njengomfana omncane, uNabil Fekir wayephakathi kwalabo ababumba into ebhola ibhola. Ngezinye izikhathi wayezoguqula amabhola noma ama-orang ebhola ibhola ayehlala egijima imini nobusuku.
Ekhaya, angizange ngiyeke ibhola. Ngangihlale nginebhaluni elincane. Ngabafowethu, sasiqhekeza ama-chandeliers, ama-vases, sasihlephula yonke into ekhaya. ukhumbula uNabil.
Ngokuhamba kwesikhathi, njengoba ekhuphuka eseyingane, uNabil wayezochitha ubusuku edlala ibhola emasimini asendaweni yeDiscines. Ukuzimisela kwakhe kwebhola ngokuqinisekile kuholele izabelo ngaleyo ndlela kuholela emsebenzini.
U-Nabil Fekir Ingane Yendaba Yomlando Plus Untold Biography Facts- Umsebenzi Wokuqala
Uthando lukaNabil lwebhola lwambona lapho eneminyaka eyi-6 ebhalisa eqenjini leqembu lesikhamuzi lakuleli dolobha, u-AC Villeurbanne owamnika isiteji ukukhombisa amakhono akhe. I-AC Villeurbanne yingubo ye-No1 yesikhungo sendawo esikhungweni sabaningi base-Algeria baseFrance abayithatha ibhola njengemisebenzi emzimbeni weDecines-Charpieu eLyon.
Ukuthatha Isinyathelo Esilandelayo:
Ngemva kokudlala unyaka no-AC Villeurbanne, uNabil uthathe umsebenzi wakhe olandelayo ekwakhiweni kwentsha ka FC Vaulx-en-Velin, iqembu lakhe lomndeni.
Ngokusho kweSoFoot Report, kwakuyiciko elinobungani bomndeni elathi kamuva laba nobaba wakhe njengomongameli ophikisana nabo noFranco-Algerian ophakeme njengabameli. Ngisho ngenkathi edlala lapho, uNabil njengabo bonke abadlali beqembu lakhe bonke babehlose ukuqeda imisebenzi yabo yobusha esikoleni esikhulu. Enye yalokho yayiyi- ukuncintisana kakhulu eLyon Academy (Iqembu elikhulu lomuzi) okuyinto ebusa football French ngaleso sikhathi.
Ithekithi eya eLyon:
Ngo-2003, uNabil wanquma ukuhamba emadolobheni aseLyon waya kwelinye iqembu eduze kwamaphupho akhe aseLyon. Ujoyine iqembu elincane elibizwa nge-SC Caluire, iqembu elingcono elikhipha futhi labonisa amakhono akhe.
Ngesikhathi e-SC Caluire, uNabil wayevelele ngokwemvelo phakathi kwabalingani bakhe. Yena kwaba umuntu owabekelwe eceleni, ngisho nokuhlelwa, kodwa uguqulwa ku-pitch.
"UFekir walithanda ibhola ngaphezu kwanoma yini. Wayengumntwana owayefuna ukwenza konke, adonse konke ukukhahlela mahhala. Wayeshesha kakhulu. Ngokuyisisekelo, wayephezu komuntu wonke futhi onamandla okuningi. Ngami, wayengumuntu onomusa "
kusho uSamir Retbi, owayengumphathi wezobuchwepheshe uCaluire nomngani wakhe omndeni kaNabil Fekir. Njengoba isikhathi siqhubeka, a UNabil Fekir oneminyaka engu-12 ubudala waqhubeka ekugcizeleleni emidlalweni yezinsizwa enye eyayibopha imiklomelo emihle kakhulu yebhola lebhola lebhola.
Ngokushesha ngemva kokuphumelela, wazibopha ezinhliziyweni zabasolwa abayisa eLyon lapho adlulisa khona izilingo zabo. Ngalesi sikhathi, uNabil wabona amaphupho akhe eqinisile futhi wakhe izifiso zokuguqula azisekho amafancy odlula.
U-Nabil Fekir Ingane Yendaba Yomlando Plus Untold Biography Facts- Umgwaqo oDumela
Lapho i-Going Though Though:
Ukuya eLyon kwakungumshintsho wephupho kuNabil Fekir. Njengoba edlala eceleni kweqoqo lezinkanyezi nokulwa nabaphikisi abaqinile, ukucindezeleka okuthile kuye kuye okwakungenakukwazi ukubhekana nakho.
Ku-2008, eneminyaka engu-14 ubudala, izinto zahamba kabi i-Franco-Algerian. UNabil Fekir akakwazanga ukubhekana nokucindezeleka okwakubonakala kuyinkinga yokuthola umsebenzi wakhe omncane onzima. Ngeshwa, Wakhululwa uLyon ngenxa yokuthi wayengumuntu omncane (akazange akhulume neminyaka yakhe) futhi ehlulekile futhi engaqiniseki futhi eqinile. Ekhuluma ngokudumazeka, uFekir ushilo ...
"Kuhlale kulula ukuhlola ukukhula komuntu osemusha phakathi kweminyaka eyishumi nesishiyagalolunye nesishiyagalolunye kungabi neshumi neshumi nane neshumi nane. Angizange ngihambisane nesinqumo sothisha, ngamangala ngesinqumo esinzima kimi. "
Uthi bewazi?… Abanye abafana abakhululiwe kanye noFekir basala bekhala. UNabil wabonisa ukuvuthwa njengoba eshiya OL ehleka ngenkathi ehlushwa inhliziyo.
Ukuqashelwa- Ukubuyela Enkampanini Yomkhaya:
Ngemuva kokudabukelwa yinhliziyo, uNabil Fekir uphinde wajoyina iklabhu yentsha yakudala i-FC Vaulx-en-Velin, imvelo yomndeni wakhe wokuqala eyayimenza afezekise futhi njengendawo yokuthola induduzo (Umbiko we-SoFoot). Udlale i-FC Vaulx-en-Velin iminyaka emithathu eyengeziwe ngaphambi kokujoyina iSaint-Priest, elinye ikilabhu elambonisa ukuthi use2010.
U-Nabil Fekir Ingane Yendaba Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Ekhumbula indlela ayehlushwa ngayo, uNabil Fekir kwadingeka ukuphoqa isiphetho sakhe ne-youth-club Saint-Priest. Lokhu kwenzeka ngenkathi ezivikela ngokuzimisela, ukuzethemba nokubekezela.
Ngenkathi ephethe uSaint-Priest, u-Young Fekir waqala ukugcizelela njengoba ekhombisa abaphikisi ukuthi unamandla kangakanani njengenkanyezi yenkampani yakhe. Ngokushesha, waqala ukuheha abantu abavela ezweni lonke. Ngisho ULyon kwadingeka abize isibindi ukuhlangana nomfanyana abekade bemkhipha emnyango. NgokukaFekir (SoFootReport);
Ngangifuna ukuthatha isenzo sokuziphindiselela, ngibabonise ukuthi benze iphutha ngenkathi ngisemncane. Ngiyazi into eyodwa: Ngizinikela ngokuphelele kuLyon. Ungumuzi wami othandekayo futhi ngiphuphe ngiphumelela lapho. Wathi Fekir (I-SoFootReport);
Ngemuva kokucabanga okuningi nokubonisana, uNabil Fekir ku-2011 kwadingeka faka eceleni isikhalazo kwelinye ukuthethelela iqembu lamaphupho akhe. Ngokushesha, wabuyela emuva ekudluliseni kwakhe futhi waqala ngokudla kakhulu uLyon B Kusukela ku-2011 kuya ku-2013 ngaphambi kokuya emsebenzini ngeqembu lokuqala ku-Agasti 2013.
Eminyakeni emine kamuva ku-2017, ngemuva kokuthi uMaxime Gonalons athengiswe ku-AS Roma, uNabil Fekir wabizwa ngokuthi induna yaseLyon.
Lo mdlalo wawuyisigameko somthelela owawubhekene nabalingani bakhe kanye neqembu ngokujwayelekile. Njenge Lionel Messi futhi C Ronaldo, UNabil Fekir ubelokhu ebopha ihembe lakhe ngemuva kokushaya amagoli ukuze athumele umyalezo webhola lakhe lokubusisa e-AS Saint Etienne enomunyu waseLyon.
Ngaphambi nangemva kokuwina i-WorldCup, umsebenzi we-Franco-Algerian oqhakazile ukwenze isithakazelo seqembu elilodwa le-Premier League namaqembu aseYurophu.
UNabil Fekir ngokungangabazeki uye wabonisa emhlabeni ukuthi izithembiso ezinhle ezilandelayo zesizukulwane sakhe saseFranco-Algeria ngemuva kukaZinedine Zidane. Bonke abanye, njengoba bethi umlando.
U-Nabil Fekir Ingane Yendaba Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
Iqiniso litshelwe. UNabil Fekir ngumuntu onothando lwakhe olungabaleki ukuhlolisiswa kweso lomphakathi ngenxa nje yokuthi impilo yakhe yothando iyimfihlo kakhulu futhi ngokuqinisekile ayidlala.
Ngesikhathi sokubhalwa, uNabil usenqabile ukudalula noma imuphi umkhondo kwabezindaba ngokuqondene nentombi yakhe noma unkosikazi wakhe. UNabil Fekir ukhombisa kuphela izithombe zeholide ku-Instagram lapho abonwa yedwa ngaphandle kwentombi noma unkosikazi.
Kwabaningi bebhola lezinyawo, ukugibela ihhashi akukwenziwanga ngaphandle kwezithombe zabo kanye nezinqola zabo ngezinhlangothi zabo. Kodwa-ke, akuyona indaba kaNabil Fekir obamba kakhulu ukudubula izithombe.
Imibiko ye-Inthanethi yembule ukuthi ungumuntu oyimfihlo othanda ukugxila ekusebenzeni kwakhe njengomphakathi kunokuba impilo yakhe yothando.
U-Nabil Fekir Ingane Yendaba Yomlando Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
Ukuphila komuntu kaNabil Fekir kuleso simo kuwukuthi Ukuthobeka nokulula. Iqembu lakhe elidala le-Vaulx-en-Velin elamamukela lapho ehlushwa yiLyon ngokuqinisekile linendawo ekhethekile enhliziyweni yakhe.
Uthi bewazi?… Ngokusekelwe kokulula, uNabil kuze kube yilapho engu-17 engumfana ongeke ahlale ehlala nabazali bakhe futhi ehlala enamathela emndenini wakhe. Labo abamazi ekhaya bayazi ukuthi naye akayona ingaphandle empumelelweni yakhe.
Kuze kube neminyaka eyi-17 (ngonyaka we-2010), kwaqhubeka kushaqisayo ukuthi uNabil Fekir wayengenawo ucingo nakuba enemali yokuthenga eyodwa. Kwadingeka abize uyise ngaphambi kokuthenga eyodwa njengoba kuvezwe nguKémil Sebaa, owayengumlingani wakhe osebenza naye e-Saint-Priest.
U-Nabil Fekir Ingane Yendaba Yomlando Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso we-LifeStyle
Indlela yokuphila kaNabil Fekir ingenye yazo I-Prudence kanye lula. Ngesinye isikhathi, wanikwa ama-euro angamashumi ayisithupha ngabazali bakhe ukuthenga i-pair of sneakers. Esikhundleni sokuthenga eyodwa, wanquma ukuthenga ezimbili futhi waqhubeka esebenzisa isikhathi eside sonke egameni lokuba ukonga.
Ngisho kuze kube yimanje ngemuva kokuthi abe yindlalifa, uFekir usalokhu efana nalokhu ebona ukuthi uyakudinga kakhulu. Ngokwesibonelo, ubheka imoto esemthethweni ye-Olympique Lyonnais ngokwanele ukuba ibe yimoto yakhe kuphela nokuthi akusizi ngalutho ukuba athenge enye imoto.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu yeNabil Fekir Childhood kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.